Phakathi kwesixeko samachibi, kwilizwe lookumkani, kukho i-Avins Bungalow. Ngokuhlobisa kwe-villa okufakwe kumhlophe, amagumbi acocekile njengoko efumana. I-pool enkulu iqinisekisa ulonwabo kubo bonke, ngelixa i-lawn ekhulayo ivumela abantwana ukuba badlale ngeenxa zonke. Amagumbi okuhlala amabini angcono kunelinye-yonwabele imidlalo yebhodi apha nosapho lwakho! Yonwabela iseshoni yeBBQ okanye usebenzise ikhitshi ukupheka ukutya kwakho ngeendleko ezongezelelweyo. Yiza apha ukuze ube nexesha loxolo kunye nabahlobo bakho.
I-Avins Bungalow ikhethekile ngenxa yayo
- Indawo elula
-Ingca etshizayo kunye nedama lokuqubha
Sikhathalele intuthuzelo yakho ngokupheleleyo! Ngenxa yoko, sibonelela
-Inverter, AC, WiFi
- Isinxibo, ii-hangers
- Intsimbi, itotshi
- Ikiti yezonyango, ukugxotha iingcongconi
-Indawo yokupaka ekhuselekileyo ukuya kuthi ga kwiimoto ezili-10
Masihambe nawe esithubeni.
- Kukho amagumbi okulala ama-3 - ama-2 kumgangatho ophantsi, i-1 kumgangatho wokuqala.
-I-AC, iTV, iibhedi ezinokumkani kunye namagumbi okuhlambela ancanyathiselwe kuwo onke amagumbi.
- Igumbi elikumgangatho wokuqala lixhotyiswe ngeTV.
- Kukho amagumbi okuhlambela ama-3 kwi-villa - zonke zincanyathiselwe.
- Indawo yokugqoka eyahlukileyo inikezelwa kuwo onke amagumbi okuhlambela.
- Kukho amagumbi okuhlala ane-air-conditioning e-2 - 1 kumgangatho ophantsi, i-1 kumgangatho wokuqala.
- Banikezela ngezihlalo ukuya kuthi ga kwi-6 kunye ne-15 yabantu ngokulandelelanayo.
- Kukho iingca ezi-2 - 100 sq ft kunye ne-5000 sq ft.
-Indawo yokuhlala ukuya kuthi ga kwi-12 kunye ne-100 yabantu ngokulandelelana iyafumaneka.
- Kukho idama lokuqubha elinobunzulu be-4 ft.
-Ifumaneka ukusuka kwi-10 AM ukuya kwi-8 PM.
- Iindwendwe zinokulungiselela ukutya kwazo ekhitshini ngaphandle kweentlawulo zongezelelweyo. Izithako ziya kuhlawuliswa ngokwenyani.
- Ixhotyiswe ngesitovu segesi, isicoci samanzi, umatshini wokuhlamba izitya, ifriji kunye nemicrowave.
4.0 ·Izimvo eziyi-11
4.0 · Izimvo eziyi-11
ISixeko saseLakes, i-Udaipur sisithsaba selizwe laseRajasthan, eboshwe yi-Aravalli Hills ukusuka macala onke. Ngobuninzi bobuhle bendalo obuphindaphindwa yimigudu yabantu, i-Udaipur yenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zinomtsalane kakhulu ukutyelela. Njengomnye weyona mimangaliso ibalaseleyo yezakhiwo zaseRajasthan, isixeko sase-Udaipur kufuneka sityelelwe abo bathanda ukubona. Ke, ngelixa ukonwabela ukuhlala kwakho obutofotofo e-Avnis Bungalow, nazi iindawo ezimbalwa ezikufutshane kunye nemisebenzi esiyicebisayo ukwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke ngakumbi.
-Yiva ubungangamsha beNdlunkulu yeSixeko
Izimvo eziyi-1 136